MSME Books @ Accounting Services - Business Centric Network (BCN)
MSME Books @ Accounting Services
October 15, 2018 October 14, 2018 San Thida
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ?‍?ကျွမ်းကျင်တဲ့ စာရင်းကိုင်ပညာရှင်?‍?တစ်ယောက်❓ရှာနေတာလား။
?သင့်လုပ်ငန်းရဲ့စာရင်းတွေကို?မြန်ဆန်တိကျစွာနဲ့ ⏲️အချိန်မီ လုပ်ဆောင်ပေးမည့်?‍?ဝန်ဆောင်မှုကို ရှာနေတာလား။
“ကျွမ်းကျင်တဲ့ စာရင်းကိုင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ရှာနေတာ” ဆိုရင်တော့ BCNEA ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ သင့်လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ “စာရင်းကိုင်ပညာရှင်” ကို ရှာဖွေပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို မေးမြန်းပြီး သင့်တော်တဲ့ ဝန်ထမ်းရဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
? ဖြင့်ဆက်သွယ်လိုပါက [email protected] သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပြီး viber (သို့) ? ဖြင့်ဆက်သွယ်လိုပါက 09970284845 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
“သင့်လုပ်ငန်းရဲ့စာရင်းတွေကိုမြန်ဆန်တိကျစွာနဲ့ အချိန်မီ လုပ်ဆောင်ပေးမည့်သူ”ကိုရှာနေတာဆိုရင်တော့ BCN ရဲ့ ??MSME Books လေးက တာဝန်ယူပါရစေ။
လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းအတွက် စာရင်းဇယားများကို ကွန်ပြူတာ စာရင်းကိုင်စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး ထည့်သွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းထားသည့် စာရင်းများကိုလည်း? လူကြီးမင်းတို့ ?အလုပ်၊?အိမ်၊?ခရီးသွားရင်း ရောက်ရာ⛳ နေရာကနေ⌛ ၂၄နာရီ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်ခ အနေနဲ့တော့ ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်မှ စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
? ဖြင့်ဆက်သွယ်လိုပါက [email protected] သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပြီး viber (သို့) ?ဖြင့်ဆက်သွယ်လိုပါက09960897874 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
သငျ့လုပျငနျးအတှကျ ?‍?ကြှမျးကငျြတဲ့ စာရငျးကိုငျပညာရှငျ?‍?တဈယောကျ❓ရှာနတောလား။
?သငျ့လုပျငနျးရဲ့စာရငျးတှကေို?မွနျဆနျတိကစြှာနဲ့ ⏲️အခြိနျမီ လုပျဆောငျပေးမညျ့?‍?ဝနျဆောငျမှုကို ရှာနတောလား။
“ကြှမျးကငျြတဲ့ စာရငျးကိုငျပညာရှငျတဈယောကျရှာနတော” ဆိုရငျတော့ BCNEA ကိုဆကျသှယျလိုကျပါ။ သငျ့လိုအပျခကျြနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ “စာရငျးကိုငျပညာရှငျ” ကို ရှာဖှပေေးဖို့ လိုအပျတဲ့အခကျြအလကျတှကေို မေးမွနျးပွီး သငျ့တျောတဲ့ ဝနျထမျးရဖို့ ဆောငျရှကျပေးနပေါတယျ။
? ဖွငျ့ဆကျသှယျလိုပါက [email protected] သို့ဆကျသှယျစုံစမျးနိုငျပွီး viber (သို့) ? ဖွငျ့ဆကျသှယျလိုပါက 09970284845 ကိုဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။
“သငျ့လုပျငနျးရဲ့စာရငျးတှကေိုမွနျဆနျတိကစြှာနဲ့ အခြိနျမီ လုပျဆောငျပေးမညျ့သူ”ကိုရှာနတောဆိုရငျတော့ BCN ရဲ့ ??MSME Books လေးက တာဝနျယူပါရစေ။
လူကွီးမငျးတို့လုပျငနျးအတှကျ စာရငျးဇယားမြားကို ကှနျပွူတာ စာရငျးကိုငျစနဈကို အသုံးပွုပွီး ထညျ့သှငျးပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ထညျ့သှငျးထားသညျ့ စာရငျးမြားကိုလညျး? လူကွီးမငျးတို့ ?အလုပျ၊?အိမျ၊?ခရီးသှားရငျး ရောကျရာ⛳ နရောကနေ⌛ ၂၄နာရီ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဝနျဆောငျခ အနနေဲ့တော့ ၁၅၀,၀၀၀ ကပျြမှ စတငျမှာဖွဈပါတယျ။
? ဖွငျ့ဆကျသှယျလိုပါက [email protected] သို့ဆကျသှယျစုံစမျးနိုငျပွီး viber (သို့) ?ဖွငျ့ဆကျသှယျလိုပါက 09960897874 ကိုဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။
Previous postDon’t miss out!!! up to 50% Promotion MSME Books
Next postMSME Books